အခမဲ့ FMODEX.DLL DOWNLOAD - DLL - 2019
အဆိုပါ Joystick မှကျေးဇူးတင်ပါသည်, သင်အလွယ်တကူတဲ့ဂိမ်း console ကစသင့်ရဲ့ PC မှာသို့မဟုတ် Laptop ကိုဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ ဒီကိရိယာကိုအပြည့်အဝတစ်ဦးအဆင်ပြေရာအရပျ၌ထိုင်သင့်အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းခံစားရန်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ အချို့သော utilities ကြောင့်များအပြင်, ခုနှစ်, Controller ကိုအတူသင် operating system ကိုသူ့ဟာသူအတွက်လုပ်ရပ်တွေကိုအမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ၏သင်တန်း, ကီးဘုတ်နဲ့မောက်စ်ချောင်းကိုကိုအစားထိုးမှာမဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည်အသုံးဝင်သောနိုင်ပါတယ်။
device ကိုစနစ်ကဆုံးဖြတ်နဲ့သော့ program နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်ပြင်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်သင် controller ကိုများအတွက်ယာဉ်မောင်းတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့သင်ခန်းစာထဲမှာကိုဖုံးလွှမ်းလိမ့်မယ်အရာဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့, Xbox 360 Joystick များအတွက် software ကို install လုပ်ဖို့သင်မည်သို့သွန်သင်ကြသည်။
အဆိုပါ Joystick ချိတ်ဆက်ဖို့တစ်ဦးချင်းနည်းလမ်းများ
ဤအပိုင်းကိုတော်တော်များများအစိတ်အပိုင်းများသို့ဝေဖန်ကြလိမ့်မည်။ သူတို့ထဲကတစ်ဦးချင်းစီအတွက်, ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းစဉ်အားဖော်ပြထားနှင့်တိကျတဲ့ operating system နဲ့ controller ကိုအမျိုးအစားများအတွက်ယာဉ်မောင်းကို install ပါလိမ့်မည်။ ဒီတော့စတင်ရန်ကြကုန်အံ့။
Windows7ကိုရန်ကြိုး controller ကိုချိတ်ဆက်ခြင်း
ပုံမှန်အားဖြင့်, အ Joystick အမြဲအားလုံးလိုအပ်သော software ကိုသိမ်းဆည်းထားသောအပေါ် disk ကိုကို bundle ဖြစ်ပါတယ်။ မည်သည့်အကြောင်းပြချက်ကဒီ CD ကိုအဘို့ အကယ်. ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး - မစိုးရိမ်ပါဘူး။ လိုအပ်သောဒရိုင်ဘာကိုတပ်ဆင်ရန်နောက်ထပ်နည်းလမ်းရှိပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, သင်အောက်ပါအဆင့်တွေကိုလုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Joystick ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် laptop ချိတ်ဆက်မဟုတျကွောငျးစစ်ဆေးပါ။
Xbox 360 ဂိမ်းဆော့ခလုတ်များအတွက်တရားဝင် software ကို download စာမျက်နှာတွင်သွားပါ။
သငျသညျအပိုင်းကိုတွေ့မြင်သည်အထိစာမျက်နှာအောက်ကိုဆင်း « Downloads »အောက်ပါပုံတွင်မှတ်သားနေသည်ဘယ်။ ဒီကမ္ပည်းပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။
ဤအပိုင်းကိုခုနှစ်တွင်သင်အသုံးပြုသူကို manual နှင့်လိုအပ်သောဒရိုင်ဘာဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, သင်ပထမဦးဆုံး operating system ကို၏ဗားရှင်းနှင့်အစာမကျြနှာ၏ညာဘက်အခြမ်းအပေါ် drop-down menu ကထဲမှာနည်းနည်းရွေးချယ်ရမည်။
ထိုအခါသင်သည်အလိုတော်မှာဘာသာစကားပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဒါဟာလာမယ့် Drop-down menu မှာလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ စာရင်းရုရှားမဟုတ်ကြောင်းသတိပြုပါ။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သတပ်ဆင်စဉ်အတွင်းအခက်အခဲများကိုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်ကို default အင်္ဂလိပ်စွန့်ခွာရန်အကြံပေးလိုပါသည်။
အားလုံးအထက်ပါခြေလှမ်းများပြီးနောက်သင်လိုင်းများကိုအောက်တွင်သော software များ၏အမည်နှင့်အတူ link ကို click နှိပ်ပြီးနှင့် OS ကိုဘာသာစကားရွေးဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
အဆိုပါရလဒ်လိုအပ်သောဒရိုင်ဘာ load ပါလိမ့်မယ်။ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ငန်းစဉ်၏အဆုံးမှာသငျသညျတူညီသော file ကို run ရမည်ဖြစ်သည်။
သင်တစ်ဦးကလုံခြုံရေးသတိပေးအတူ window ကိုရပါလိမ့်မယ်စတင်သည်ဆိုလျှင်, ခလုတ်ကို box ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Run ကို" သို့မဟုတ် « Run ကို».
ပဲစက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာရှည်တံ့သောဖြည်ချဖို့, ပြီးနောက်, သင်တစ်ဦးနှုတ်ဆက်ခြင်းနှင့်လိုင်စင်သဘောတူညီချက်နှင့်အတူအဓိက window ကိုမြင်ရပါလိမ့်မည်။ တောငျးဆိုခကျြတွင်ကျနော်တို့သတင်းအချက်အလက်ကိုဖတ်, ပြီးတော့လိုင်းမှလာမယ့်တစ်ဦးစစ်ဆေးမှတ်ထား «ငါသည်ဤသဘောတူညီချက်ကိုလက်ခံ» နှင့် button ကိုနှိပ် "Next ကို".
အခုဆိုရင်သင် utility ကိုသင့်ရဲ့ PC မှာသို့မဟုတ် Laptop ကိုပေါ်မှာရှိသမျှလိုအပ်သော software ကို install လုပ်ပါလိမ့်မယ်သည်အထိအနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်းရန်လိုအပ်သည်။
အခုဆိုရင်သင်တပ်ဆင်၏ရလဒ်ပြသပါလိမ့်မည်သည့်အတွက်ပြတင်းပေါက်မြင်လိမ့်မည်။ အရာအားလုံးအမှားမပါဘဲဝင်လျှင်, ပြတင်းပေါက်အောက်ကပုံတွင်ပြထား။
ထိုအခါရိုးရှင်းစွာခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ « Finish ကို»။ ယခုတွင်သင်သည်သာအ Joystick ချိတ်ဆက်နိုင်ပြီးဒါဟာအပြည့်အဝအားသာချက်ယူနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါဂိမ်းဆော့ခလုတ်အတည်ပြုရန်နှင့် configure လုပ်ဖို့, သင်အောက်ပါအဆင့်တွေကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
Push ကိုခလုတ်ပေါင်းစပ် «က Windows » နှင့် « R ကို» ကီးဘုတ်ပေါ်မှာ။
ပေါ်လာပြတင်းပေါက်မှာ command ကိုရိုက်ထည့်ပါjoy.cplနှင့်စာနယ်ဇင်း « Enter ».
ရလဒ်အဖြစ်သင်စာရင်းသင်သည်သင်၏ဂိမ်းဆော့ခလုတ်၏ status ရှုမြင်နိုင်ပြီး, ကစမ်းသပ်မှုများနှင့်ညှိကိုင်ဖို့ဒီဝင်းဒိုးကိုခုနှစ်တွင်သင့်ရဲ့ controller ကို Xbox 360 ဖြစ်သင့်သောပြတင်းပေါက်မြင်လိမ့်မည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Properties ကို" သို့မဟုတ် « Properties ကို» ပြတင်းပေါက်၏အောက်ခြေ၌တည်၏။
ဤသည် Tab နှစ်ခုနှင့်အတူပြတင်းပေါက်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။ ၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်စမ်းသပ်ဖို့ - သူတို့ထဲကတဦးတည်းအတွက်သင် device ကို၎င်း, ဒုတိယ configure နိုင်ပါလိမ့်မည်။
Windows 8 ကိုအပေါ်တစ်ဦးကြိုး Joystick အသုံးပြုခြင်းနှင့် 8.1
Windows 8 နှင့် 8.1 များအတွက် Joystick ကားမောင်းသူ Download အထက်တွင်ဖော်ပြထားလုပ်ငန်းစဉ်ကနေကွာခြားပါဘူး။ သငျသညျကိုလည်းနည်းနည်း OS ကိုလေးစားနေချိန်မှာ, ဤအမှု၌, Window7များအတွက်ယာဉ်မောင်းကို download လုပ်ပါဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါခြားနားချက်ကိုသာသင် installation ဖိုင် start လမျး၌ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒီနေရာတွင်လုပျဆောငျရမညျအရာဖြစ်တယ်။
သငျသညျ, ယာဉ်မောင်း installation ဖိုင်ကို download လုပ်ပါညာဖက်မောက်စ်ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါနှင့်ဖြတ်လမ်း menu ထဲကလိုင်းရွေးချယ်လိုက်တဲ့အခါ "Properties ကို".
ဖွင့်လှစ်သောပြတင်းပေါက်၌, tab ကိုသွားပါ "အသုံးပြုပုံများ"ဘယ်အလွန်ထိပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဤအပိုင်းကို, သင်မျဉ်းစစ်ဆေးမှုများ mark ရန်လိုအပ်မည် "compatibility mode မှာဒီ program ကို run".
ရလဒ်အနေနဲ့ကပြောသည်ကမ္ပည်းအောက်တွင်တည်ရှိတက်ကြွမီနူးဖြစ်လာသည်။ drop-down list ထဲက, မျဉ်းကိုရှေးခယျြ «က Windows7".
အခုဆိုရင်ပဲခလုတ်ကိုနှိပ် "Apply" သို့မဟုတ် "အိုကေ" ဒီပြတင်းပေါက်၌တည်၏။
ဒါဟာ installation ဖိုင် run နဲ့ Windows7ကိုရန် Joystick ချိတ်ဆက်ဖို့အသုံးပြုသူကို manual ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့ဖြစ်ကြောင်းအတူတူလုပ်ရပ်များလုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်သည်။
Windows 10 ကိုအပေါ်တစ်ဦးကြိုးဂိမ်းဆော့ခလုတ်တက်ချိန်ညှိခြင်း
အဆိုပါ Joystick, Xbox 360 တို့အတွက်ဆော့ဖ်ဝဲ၏ Windows 10 ကိုတပ်ဆင်၏ပိုင်ရှင်များအတွက်အပေါ့ပါးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ယာဉ်မောင်းတပ်ဆင်ရန်နှင့်ပေးထားသောဂိမ်းဆော့ခလုတ်ဘို့မလိုအပ်ပါဘူးဆိုတဲ့အချက်ကို။ အားလုံးလိုအပ်သော software ကိုဒီ operating system ကိုအတွက် default အနေဖြင့်ပေါင်းစည်းထားသည်။ သငျသညျကို USB-connector ကိုရန် Joystick ချိတ်ဆက်နှင့်သင့်အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းကိုခံစားမှသာလိုအပ်ပါတယ်။ သငျသညျအခက်အခဲရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်း, ထိုစက်ကိုချိတ်ဆက်ပြီးနောက်ဘာမျှမဖြစ်ပျက်ပါကသင်သည်အောက်ပါလုပျဆောငျရမညျ။
ခလုတ်ကိုတွန်း "Start" desktop ပေါ်မှာ၏အောက်ပိုင်းလက်ဝဲထောင့်၌။
အပိုင်းကိုသွားပါ "Options ကို"သင့်လျော်သောနာမည်ပြတင်းပေါက်ညီကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ရလဒ်အနေနဲ့ကသင်ကိုကလစ်နှိပ်ပါရမယ်တဲ့စာမျက်နှာခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မယ် "အပ်ဒိတ်များအဘို့ Check".
updates များကိုစနစ်အားဖြင့်တွေ့ရှိကြသည်ဆိုပါကအလိုအလျှောက်သူတို့ကို install လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ Xbox ဂိမ်းစက်ဂိမ်းဆော့ခလုတ်ယာဉ်မောင်းက Windows 10 မှာပေါင်းစည်းကြသည်ကတည်းကအများဆုံးကိစ္စများတွင်, ပြဿနာတစ်ခု Joystick banal update က OS ကိုအတူဖြေရှင်းနေပါတယ်။
ကြိုးမဲ့ Controller Connection ကို Process ကိုအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့ရှိသူများအနေဖြင့်အတန်ငယ်ကွဲပြားခြားနားသည်။ အမှန်မှာသင်ပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့ PC မှာသို့မဟုတ် Laptop ကိုလက်ခံချိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ထိုအနာဂတျမှာပြီးသားအထံတော်သို့ကြိုးမဲ့ Joystick ကိုချိတ်ဆက်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤကိစ္စတွင်ကျနော်တို့လက်ခံသူ့ဟာသူများအတွက် software ကို install လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အချို့ကိစ္စများတွင် device ကိုစနစ်တကျစနစ်ဖြင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိနှင့်ယာဉ်မောင်းတပ်ဆင်မလိုအပ်ပါ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ဆော့ဖ်ဝဲကို manually install လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်သောအခါအခွအေနမြေားရှိပါတယ်။ ဒီနေရာတွင်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ယျ။
သင့်ရဲ့ Laptop ကိုသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာ၏ USB အ-port ကိုရန်လက်ခံချိတ်ဆက်ပါ။
အခုဆိုရင်ကျနော်တို့လိုအပ်တဲ့ drivers တွေကိုရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ရှိရာမိုက်ကရိုဆော့ဖ်ဆိုက်, သွားပါ။
ဒီစာမျက်နှာတွင်, သင်က search box ကိုရှာဖွေသည့်ကိရိယာအမျိုးအစားများ၏ရွေးချယ်မှုနှင့်အတူကို click ရန်လိုအပ်သည်။ အောက်ကပုံဥပမာမှာပြထားတဲ့အတိုင်းလယ်ပြင်ဒေတာဖြည့်ပါ။
အနည်းငယ်သောဤလိုင်းများကိုအောက်တွင်သင်သည်ရှာဖွေရေးရလဒ်များကိုတွေ့မြင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာစာရင်းထဲတွင်သင်၏ကြိုးမဲ့စက်ကို၏အမည်ကိုရှာဖွေပေါ်မှာ click နှိပ်ဖို့လိုအပ်ပေသည်။
သင်ကရွေးချယ်ထားသည့် controller ကိုများအတွက် software ကို download စာမျက်နှာတွင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျအပိုင်းကိုတွေ့မြင်သည်အထိကျနော်တို့ကနည်းနည်းစာမျက်နှာကိုဆင်းချသွားပါ « Downloads »။ ဒီ tab မှာရှေ့ဆက်မည်။
အဲဒီနော, သင်က၎င်း၏ operating system ကို၎င်း၏စွမ်းရည်နှင့်ယာဉ်မောင်းဘာသာစကား၏ version တစ်ခုသတ်မှတ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အရာအားလုံးအတိအကျယခင်နည်းစနစ်များအတွက်ကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ထို့နောက်ဆော့ဖ်ဝဲ၏နာမတော်ဖို့ link ကို click လုပ်ပါ။
ထိုနောက်မှသင် download လုပ်ဘို့စောင့်ဆိုင်းနှင့် software ကို install လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ တပ်ဆင်၏အလွန်ဖြစ်စဉ်ကိုတစ်ဦးကြိုး controller ကိုချိတ်ဆက်ပြီးဖော်ပြထားကြောင်းနှင့်ဆင်တူသည်။
ကြိုးမဲ့ကိရိယာ၏အမှုအားလုံးကိုတူညီတဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလျှောက်ထားကြသည်: သင်က Windows 8 သို့မဟုတ် 8.1 ကိုအသုံးပြုနေလျှင် - ယာဉ်မောင်းလိုအပ်သောမကျမည်အကြောင်းရှိသောကြောင့် updates များကိုစစ်ဆေးသည် - Windows 10 ကိုပါလျှင်တစ်ဦး compatibility mode ကိုသက်ဆိုင်ပါသည်။
ကို receiver မှန်ကန်စွာစနစ်ဖြင့်ဖော်ထုတ်သောအခါ, သင်လက်ခံနှင့် Joystick ဖွင့်, သင့်လျော်တဲ့ခလုတ်ကိုနှိပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ အားလုံးပြုလေ၏သောအခါ, ကွန်နက်ရှင်ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဤသည်မည်ဖြစ်ပြီးအဆိုပါအစိမ်းရောင်နှစ်ဦးစလုံးကိရိယာများပေါ်တွင် LED သက်သေခံပါလိမ့်မယ်။
software ကို install လုပ်ဖို့ဘုံနည်းလမ်းများ
အချို့ကိစ္စများတွင်အထက်ပါအဆင့်များမှာအားလုံးကူညီကြဘူးသည့်အခါအခြေအနေကိုလည်းမရှိ။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သငျသညျအဟောင်း-ကားမောင်းသူတပ်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်းများထံမှအကူအညီကိုရှာပေးနိုင်သည်။
Method ကို 1: အဆိုပါ utility ကိုအလိုအလျှောက်ဆော့ဖ်ဝဲကို update ပါလိမ့်မယ်
တခါတရံပျောက်ဆုံးယာဉ်မောင်းများအတွက် system ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးကြောင်းအစီအစဉ်များဂိမ်းဆော့ခလုတ်ချိတ်ဆက်များ၏ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်သည်။ ဤနည်းလမ်းကိုကျနော်တို့အသေးစိတ်အတွက်ကြင်နာရဲ့အကောင်းဆုံး utility ကိုလေ့လာထားတဲ့သီးခြားဆောင်းပါး, ကျိန်ပါပြီ။ အဲဒါကိုဖတ်ပြီးနောက်, သင်အလွယ်တကူ Joystick များအတွက် software ကို၏ installation နှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
သင်ခန်းစာကို: drivers တွေကို install လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးအစီအစဉ်ကို
ကျနော်တို့အစီအစဉ်ကို DriverPack Solution မှသတိထားရမှာအကြံပြုပါသည်။ ဒီ utility ကိုများတွင်ယာဉ်မောင်းများ၏အများဆုံးကျယ်ပြန့်ဒေတာဘေ့စများနှင့်ထောက်ပံ့ထားသည့်ကိရိယာများများ၏စာရင်း။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုအလွယ်တကူ program ကိုနားလည်ရန်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်တဲ့သင်ခန်းစာပြင်ဆင်ကြပြီ။
Method ကို 2: device ကို ID အနေဖြင့် ON Loading
ဤနည်းလမ်းကိုကျနော်တို့သီးခြားသင်ခန်းစာ, သငျသညျကိုအောကျတှငျတှေ့လိမျ့မညျသော link တစ်ခုမြှုပ်နှံခဲ့ကြသည်။ သူသညျသငျ၏လက်ခံသို့မဟုတ် Joystick ၏ဝိသေသလက္ခဏာကိုသင်ယူ, ပြီးတော့အထူး website တွင်တွေ့ရသော၏ ID ကိုသုံးပါရန်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့သောအွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများသာအရေအတွက်ကို ID အနေဖြင့်လိုအပ်သောဒရိုင်ဘာရှာတွေ့အတွက်အထူးပြု။ သငျသညျအကြှနျုပျတို့အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်သင်ခန်းစာအတွက်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ခြေလှမ်းညွှန်ကြားချက်အားဖြင့်အဆင့်။
Method ကို 3: လက်စွဲစာအုပ်ကားမောင်းသူတပ်ဆင်ခြင်း
အဆိုပါဖွင့်လှစ် "Device Manager"။ ထိုသို့ပြုမှမည်ကဲ့သို့သင်ယူဖို့, သင်တို့သည်ငါတို့၏သက်ဆိုင်ရာသင်ခန်းစာကနေလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ်။
သင်ခန်းစာကို: က "Device Manager" ကိုဖွင့်
ပစ္စည်းကိရိယာများ၏စာရင်းအမည်မသိ device ကိုရှာကြ၏။ ၎င်း၏အမည်ကိုပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ right-click လုပ်ပါ။ ထိုနောက်မှ select လုပ်ပါအတန်း "Update ကိုယာဉ်မောင်း Software များ" ဆက်စပ် menu ကနေ။
လာမယ့် window ထဲမှာ, ဒုတိယကို item ပေါ်တွင် click - "လက်စွဲစာအုပ်ရှာဖွေရေး".
နောက်တစ်နေ့ခြေလှမ်းကိုပြတင်းပေါက်၌ပေါ်လာသောစာရင်းထဲက device ကိုအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ဖို့ပါပဲ။ ကျနော်တို့အပိုင်းကိုရှာဖွေနေပါသည် "Peripheral, Xbox 360"။ ဒါကြောင့်ကို Select လုပ်ပါနှင့် button ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Next ကို".
ဒါကရွေးချယ်ထား type ကိုပိုင် Device ရဲ့စာရင်းဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်လက်ခံ, ကြိုးမဲ့သို့မဟုတ်ကြိုး controller ကို - ဤစာရင်းထဲတွင်, သင်ကမောင်းသူမလိုအပ်သော device ကိုရွေးချယ်ပါ။ အဲဒီနောကျတဖနျခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Next ကို".
ရလဒ်အနေနဲ့ယာဉ်မောင်းကို Windows ရဲ့ standard အခြေစိုက်စခန်းကိုသုံးပါလိမ့်မယ်နဲ့ device ကိုမှန်ကန်စွာစနစ်ကအသိအမှတ်ပြုသည်။ ထိုအခါသင်သည်ချိတ်ဆက် devices များစာရင်းထဲမှထုတ်ကုန်များကိုမြင်လိမ့်မည်။
ထိုအခါသင်သည်သင့် Xbox 360 Controller ကိုသုံးစွဲဖို့စတင်နိုင်ပါသည်။
ကျနော်တို့ကဤနည်းလမ်းများထဲမှသင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာတစ်ခု, Xbox 360 Joystick ချိတ်ဆက်ကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ ဆော့ဖ်ဝဲသို့မဟုတ် device ကို setting များကို၏ installation စဉ်အတွင်းသင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းများကိုသို့မဟုတ်ပြဿနာများရှိပါက - မှတ်ချက်များအတွက်ရေးပါ။ ကျွန်တော်တို့ကိုအခွအေနေတိုးတက်လာဖို့အတူတကွကြိုးစားကြည့်ကြပါစို့။
ဗီဒီယို Watch: Error falta y falta en Windows 1087 I SOLUCIÓN 2018 (သြဂုတ်လ 2019).